Halkuu Salka Ku Hayaa Xadhiga Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Ilay) | Marsa News
Halkuu Salka Ku Hayaa Xadhiga Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Ilay)
August 28, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Shalay waxaa xabsiga loo taxaabay madax-weynihii hore ee dowlad deegaan-ka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo maalmihii ugu danbeeyay-ba xabsi ku guri ku ahaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ka soo muuqday warbaahinta isaga oo ay dhinac-yada ka socdaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda dhexe ee federaalka lagu-na sii wado xabsi lagu sii heyn doono inta maxkamadeyntiisa laga gaarayo.
Xariga Cabdi Maxamuud Cumar ayaa salka ku haya eedeymo la xiriira gabood falo ka dhan ah Xuquuqda Aadanaha iyo ku tagri fal awoodeed.
Hay’addaha Xuquuqda Aadanaha ayaa tan iyo markii la qabtay Cabdi Maxamuud Cumar si is daba joog ah u codsanayay in maxkamad lagu soo taago taca-diyo is daba joog ah oo ka dhacay dowlad deegaan-ka Soomaalida.
Lama oga halka ay maxkamadeyntiisu ka dhici doonto iyo dacwadaha xeer ilaalintu hor geyn doonto maxkamada, hasse ahaatee eedeymaha ugu waaweyn ayaa ah dilal qorsheyn , jir dil, xabsi sharci –darro ah iyo ku tumusho dhinaca awood ah, sida ay sheegeen hay’addaha Xuquuqda Aadanaha.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiye Ahmed oo mar arinta Cabdi Maxamuud Cumar wax laga weydiiyay ayaa sheegay in uu cadaallad mari doono isaga oo yiri” arrintan Cabdi waxey u taallaa hay’addaha garsoorka, cadaallada ayuu-na mari doonaa.
Sida uu soo bandhiggay taleefishinka Itoobiya ee ETV, waxaa guriga laga heley hub tiro badan oo ka koobnaa qoryaha AK47, kuwaas oo ka badnaa 5 qori iyo rasaastooda, iyo waliba baastoolado, wuxuuna TV-ga sheegay in Cabdi Maxamuud Cumar uu haystay.
Madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Cagjar ayaa sheegay in is badal weyn uu ka sameyn doono arrimaha la xiriira Xuquuqul Insaanka deegaanka, dadku-na noqon doonaan kuwo u madax-bannaan arag-tidooda xitaa haddii ay doonayaan in ay wax ka sheegaan maamulkiisa.
Hay’addaha Xuquuqda Aadanaha ayaa dowladda dhexe Itoobiya ka codsaday in cadaallada la horkeeno dhamaan dadkii ka danbeeyay gabood falladii ka dhacay dowladda deegaanka Soomaalida, hasse ahaatee Cabdi Maxamuud Cumar ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay ee maxkamad loo soo taago gabood falladii bilihii ugu dan-beeyay ka dhacay dalka Itoobiya.